Ukuze kagesi amandla izidingo umsindo walo. Siqukethe uhlelo isikhulumi kanye iyunithi electronic oguqula isiginali kagesi ngaphambili wabuthela ku kunyakaza umsindo. Le divayisi okuthengiswa okukhethekile ezitolo ngokuhlukile isiginci sikagesi. Ingase futhi kuqoqwe bebodwa, kodwa ukusebenzisa lolu namandla kungaba ekhaya.
Yini izigaba zihlukaniswe yokukhulisa umsindo
On idivayisi isiginci amplifier kungaba ezimbili zama:
Eyokuqala ibhokisi elilodwa, okuyinto izindlu kanye alalelwayo, kanye Converter isignali. Njengomthetho, babe ongaphakeme amandla combos. Nokho, phakathi nabo inqwaba ongakhetha, uyakwazi ukunikeza umsindo wekhwalithi ephezulu. Lezitaki basonta imishini yobuchwepheshe: bona buhlukile abakhuluma amplifier uqobo.
Uma ukuthenga imishini ngenxa yokuqhuba ekhaya, nje ukuthenga combo. Ukuze ukusebenza futhi ukuqopha studios kukhona izitaki ehlelelwe more. Ziyakwazi ezibizayo nokunye okuningi, kodwa ukunikeza umsindo wekhwalithi ephezulu. Thenga kubo ekhaya okungenanzuzo, ngoba zibonisa ezingaba kuphela lapho izinga labo ivolumu ngesikhathi kwesigamu par. Ngokwesibonelo, uma uvele utshelwe ukuthi isiginci amplifier uyakwazi ukukhulula Watts 100, ukuthi ukuze ubone zonke izimfanelo zakhe ezinhle unga at 50 Watts ivolumu.
Umehluko Amps isikimu
Iyunithi electronic yakhiwa preamplifier (it unesibopho sokuqoqa umsindo engenayo) kanye okonechnika (it icacisa eqoqwe amaza omsindo). Isikimu isiginci amplifier kungenzeka omunye izinhlobo:
Isibani ngokugcwele. Bona abhekwa elite, futhi ofanele kakhulu ukufunda. Nge-amplifier enjalo ungakwazi uqaphela iphutha lenziwe phakathi umdlalo.
Nge Transistor okonechnikom kanye tube amplifier. Inketho ethandwa kakhulu, njengoba luhlobene maphakathi nawo-emakethe futhi ihlinzeka izinga ezinhle umsindo.
Ngokugcwele Transistor. Kuyinto onobuhle lula futhi engabizi ukuthi iyakhokheleka Wabasaqalayo. Lokhu amp isiginci akuyona ukuthi kunzima ukuba babuthane ngezandla zabo, njengoba izingxenye angathengwa at cishe kunoma iyiphi radiozapchastey esitolo. On ukudayiswa ungathola kits ngomumo eyenziwe kulabo abafuna ukuzama wena njengomphathi umklami.
Khetha-amplifier e icebo lakhe kuwufanele esuselwa yabo kanye nesabelomali. Bonke kuhluke izinga umsindo. Elinye iphuzu okufanele ayicabangele lapho ukuthenga - ukukhanda tube isiginci Amps ezifana kakhulu eqolo ngaphezu kwanoma ezinye izinketho.
Buhle buni obungaba kungadalwa
yokukhulisa umsindo Abaningi bayakwazi ukudala nemisindo, okuyinto edingekayo ukuze yokuqophela noma ukubukeza ekhaya. Ngokuvamile kukhona ezimbili: umsindo okumsulwa (efana ku i isiginci acoustic) kanye oredrayv (enamathiselwe ithuluzi idwala umsindo Overdrive).
Inkinobho komunye umphumela kwenye ngokuvamile kuba kubonakala kuphatheke kabuhlungu kakhulu, ngakho-ke kungcono uthenge uhlelo ezengeziwe isiginci processor. Kuyinto isinyathelo, ngawo ungakwazi ukushintsha izilungiselelo umsindo ngenkathi udlala. Kungasiza uthola imiphumela nakakhulu.
Isiphathi esikhulu panel imisebenzi
Modern isiginci amplifier has a kwetfulwe eyinkimbinkimbi control panel nge inani elikhulu nabalawuli. Khona-ke abakhululiwe eziyinhloko ezintathu:
degree of Overdrive (uma lo mphumela ishunyekwa);
imisindo (kungase kube eziningana: bass, zonxantathu, maphakathi).
Ukusebenzisa izilawuli, ungalungisa umsindo ngendlela esilindele yakho: ukwenza kube ethambile, ukushintsha ithoni yomculo, noma usethe degree abalulekile sindisa. Kungcono ukukhetha yokukhulisa umsindo, okunikeza zonke izici ngokwezifiso.
Kungenzeka ukuba babuthane amplifier ngokwakho
Uma ufuna ukulondoloza ukuqoqa amp isiginci ngezandla zenu, khona-ke udinga nginazo inqwaba amathuluzi: sokuzivivinya, oscilloscope, umhloli, nokunamathisela ngomthofu yensimbi nesitendi sokuprakthiza. Ngaphezu kwalokho, ukuhlela irediyo izingxenye (okusekelwe isikimu akhethiwe), indaba for ibhodi futhi izindlu. Zilungiselele lokuthi ekugcineni abiza amandla amaningi.
izikimu Iningi ukunikela babuthane tube yokukhulisa umsindo. Lokhu kuyiqiniso, ngoba kukhona asezingeni kunokubuthwa Transistor. Nokho, uma ufuna ukwakha imodeli high quality, une uhlu olude izinto azitholakali emakhemisi. Kungcono ukuqoqa amasampula lokuqala Transistor inketho.
Kuhle Guitar zesikhulisa
Esikhathini esitolo umculo ungacabanga eziningi ezahlukahlukene bese brand of yokukhulisa umsindo ongakhetha kuzo. Umdlali ngamunye ekhetha isiginci amplifier efanelekayo, esuselwa yabo. Usezingeni brand engcono onobuhle zihlanganisa:
Ibhokisi Blackstar ID: Stereo Core 10. It izici umsindo we-stereo, ongakhetha ezintathu amandla, imiphumela eminingi kanye esakhelwe. Kuyinto imodeli ngempela isabelomali ukuthi emadanisekako ngekhwalithi kuya nozakwabo ezibizayo.
Peavey Vypyr VIP 3 - Semi-combo, okuyinto efanelekayo ukugcwaliseka imibono. Basuke ekhiqizwa besebenzisa ubuchwepheshe bamuva digital futhi abathole amaphuzu aphezulu abaculi hhayi kuphela, kodwa futhi kusuka kuzazi e umsindo.
Tube Marshall C5-01, okwathi nakuba umthamo wayo omncane, ukhiqiza eliphezulu futhi nomsindo omkhulu.
Fender Mustang III V2 - Cell samuntu, ezifanele ukusetshenziswa esikhaleni esincane ezazifundiswe ekhaya.
Roland CUBE Lite nge ikhono ukudlala ekhaya e-headphones, kubaluleke kakhulu uma uhlala edolobheni futhi akudingeki amakamelo soundproofed.
Zonke yokukhulisa umsindo kule simo kukhona combo uhlobo Site Wabasaqalayo nayizimfundamakhwela. Phakathi okunezinhlobonhlobo izitolo ungathola ezinye izinketho ehloniphekile. yokukhulisa umsindo zesimanje ziye wagibela kude phambili e izinga umsindo futhi ube nenani elikhulu imisebenzi ewusizo.
Uba kanjani idume ezinye umculi Japanese?
Izikhiye "METTEM": ezibekiweko lobuchwepheshe kanye nokubuyekeza. Mechanical inhlanganisela yokuvala
Idivayisi phansi ku setshe ukhonkolo: ukufakwa, izinto, amathuluzi, iziqondiso
Norm kwamangqamuzana egazi abomvu in abesilisa nabesifazane: etafuleni, izinkomba main futhi emagama